मलेसियाद्वारा ३१ हजार नेपाली कामदार माग, कहिले देखी ? - jagritikhabar.com
मलेसियाद्वारा ३१ हजार नेपाली कामदार माग, कहिले देखी ?
मलेसियाले ३१ हजार नेपाली कामदारको माग गरेको छ। मलेसियाले क्‍वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् ३१ हजार २ सय १ जना कामदार माग गरेको हो ।
नेपाली दूतावासले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकालेर मलेसियाका कम्पनीहरूले ३१ हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदार माग गरेको जानकारी दिएको हो ।
मलेसियाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि १७ हजार १ सय १६, सेक्युरिटी गार्डसहित सेवा क्षेत्रका लागि १० हजार १ सय ८३, कृषि क्षेत्रका लागि १ हजार ४ सय ७५, प्लान्टेसनका लागि १ हजार ३ सय ९७ र निर्माण क्षेत्रका लागि १ हजार ३० जना नेपाली कामदार माग गरेको हो ।
उता मलेसियाले नेपाल भन्दा अगाडी बाङ्लादेशबाट पहिला कामदार ल्याउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।